असोज ०१, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- केहि समय अगाडी मात्रै भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए। तर उनले चीनका लागि नेपाली राजदूतावासलाई कुनै जानकारी नदिएको बुझिएको छ।
बेइजिङ जाने गरी उडेका प्रचण्ड बेइजिङ पुग्नु अगाडीनै नेपाल फर्किने बुझिएको छ। उनको साथमा पत्नी सीता दाहाल, कान्छी छोरी गंगा दाहाल आचार्य, गंगाकी छोरी (नातिनी) र स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा चीन पुगेका छन्।
प्रचलित चलन अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा सम्बन्धित देशको राजदूतावासलाई जानकारी दिने गरिन्छ तर प्रचण्डले भने यसो नगरेको . बुझिएको छ ।
प्रचण्ड भन्दा एक दिन अगाडी पुगेका ‘नेकपा’का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएका छैनन्। प्राप्त जानकारी अनुसार श्रेष्ठ मंगलबार बेइजिङ पुग्ने छन्।
यता प्रचण्ड चीन राजनीतिक भ्रमणको लागि गएको भएता पनि उनले प्रादेशिक नेतासँग मात्रै भेटवार्ता गरेर फर्कने श्रोतको दावी छ। बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट हुने भए मात्र प्रचण्ड बेइजिङ पुग्ने छन्। नत्र उनी बेइजिङ नपूगी बीचबाट फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रकाशित : सोमबार, असोज ०१, २०७५१२:५१
ओली अमेरिकाबाट नेपालको लागि उडे !
अन्नतः राष्ट्रियसभाका ३ सदस्यले लिए सपथ, राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाेट हाल्न पाउने
भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण, स्थानीयद्वारा बिरोध !
मलेसियामा बेपत्ता शिवाकोटीको मृत्यु!